China Ink Remover BT-300 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
BT-300 imvura yekubvisa chero ruvara rwePP uye PE zvinhu zvisina kana tembiricha inodiwa.
Izvo ndezve PP uye Pe firimu yepamusoro yekudhinda inki kubviswa.
BT-300imvura yekubvisa chero ruvara rwePP uye PE zvinhu zvisina kana tembiricha inodiwa. Yakaedzwa zvichibva neinki yekudhinda pamabhegi akarukwa zvese kumba nekune dzimwe nyika. Inogona kutsanya uye zvinobudirira kuchenesa zvekumberi yekudhinda inki uye imwe smudge inokonzeresa kusvibiswa kwezvakatipoteredza pamusoro pekudzokorora PP ne PE zvigadzirwa uye kudzosa yakachena uye chena ruvara rwezvinhu.
Hapana zvirimo mune zvine ngozi zvinhu senge phosphorus uye nitrite nezvimwe.
Hapana chikonzero chekupa tembiricha yekuchengetedza simba nemari yakaderera yekugadzirisa
Izvo zvakanaka kugadzirwa kwakawanda kwekukurumidza kwayo kwakachena, sezvo ichingoda 0.5 ~ 1hour.
Inogona kuiswa pese pese pazvose bhegi kana zvidimbu zvakadonha.
Hapana zvimwe zvakawanda zvinodiwa.
Yakagadzirwa isina zvinhu zvine njodzi uye mvura yemarara haina kusvibiswa.
Matambudziko mazhinji pakati pevatengesi nevatengi anokonzerwa nekusawirirana kwekutaurirana. Mutsika, vatengesi vanogona kusazeza kubvunza zvinhu zvavasinganzwisise. Isu tinoputsa izvo zvipingamupinyi kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana izvo zvaunoda padanho raunotarisira, kana iwe uchida icho. Inokurumidza kuendesa nguva uye chigadzirwa chaunoda ndiyo yedu Criterion.
"ZVINOTAURWA NDIYO CHOKUTANGA UYE purofiti ICHOKWADI". Isu tinovimbisa isu tinokwanisa kupa yakanakisa mhando uye inonzwisisika mutengo zvigadzirwa kune vatengi. Nesu, kuchengetedzeka kwako kunovimbiswa.
Tinotarisira kunzwa kubva kwauri, ungave uri mutengi ari kudzoka kana mutsva. Tinovimba muchawana izvo zvamuri kutsvaga pano, kana zvisiri, ndokumbirawo mubate nesu nekukurumidza. Isu tinozvikudza pamusoro pepamusoro notch sevhisi uye mhinduro. Ndinokutendai nebhizimisi renyu uye rutsigiro!
Pashure: PET chinamirwa Remover BT-336
Zvadaro: Yakasarudzika Brightener OB
Ink Remover YeFirimu Bhegi
Ink Remover Ye PE
Ink Remover YePP
Isinganzwi Ink Remover